Jude Bellingham Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Jack Harrison Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Che Adams Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Conor Coady Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Perr Schuurs Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Jannik Vestergaard Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Daniel Podence Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Ryan Gravenberch Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
zvoseAlgeria Nhabvu VatambiCameroonia Nhabvu VatambiGhanian Nhabvu VatambiVatambi venhabvu veIvory CoastNigerian Nhabvu VatambiSenegalese Nhabvu Vatambi
Arthur Masuaku Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Vakadaro Benrahma Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kupenya Osayi-Samuel Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Lassina Traore Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Carlos Vinicius Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
zvoseTurkish Nhabvu Vatambi
Cengiz Pasi Pemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
musha Nei Nyaya Dzemwana
Isu tinoita vatambi venhabvu nyaya dzehudiki kuti vachengetedze vateveri pane nyaya nezvevatambi vavanoda. LifeBogger inotora nyaya dzinonyanya kubata, dzinokatyamadza uye dzinonakidza nezve nyeredzi dzenhabvu zvichireva nezvenhambo dzehudiki kusvika zvino. Ndozvatiri!
Wese munhu wepanyika wepasi pano ane nyaya yeudiki uye vatambi venhabvu havasi kubva kumapuraneti ekune dzimwe nyika. Zvakare havasi mutants vane superpowers uye psychic kugona. Ivo vari-muchokwadi vanhu vanogona kutevedzera vavakaberekerwa kumadzitateguru epasi.
Nekudaro, sevanhu vese, vatambi, mamaneja uye kunyange vakakurumbira vemitambo vane nyaya dzehucheche idzo dzinonongedza zviitiko zvinonakidza uye zvinobata kubva kubva pamakore avo ekuumbwa kuburikidza nehuduku kusvika kumabvi ekukura.
Lifebogger yakadoma inozivisa zviitiko zveudiki zvevatambi venhabvu, mamaneja uye elite. Kubva kuRR: Van Dijk, Luka Modric, Kylian Mbappe, Zinedine Zidane uye Aleksander Ceferin. Mifananidzo Credits: LB.
At Lifebogger, tinotora nyaya dzehupenyu hwepakutanga idzo dzakakosha nzvimbo dzenhoroondo dzinonakidza dzatinozivisa nezve vatambi venhabvu, mamaneja uye vanhu vakuru munyika yose.
Zvikonzero kumashure kwezvakanaka zvinoitwa izvi kupa chikamu chedu kuvandudza mutambo wenhabvu, tichifunga kuti mararamiro ehupenyu hwepakutanga, kuwana uye kusangana kwevatambi venhabvu, mamaneja nevarume vakuru havangopi chete zvimwe zvezvidzidzo zvakakosha mu Hupenyu asi farira kune avo vari kungotanga parwendo rwavo.
Nhoroondo kana dzechokwadi nhabvu nyaya dzakakosha kune vadiki venhabvu vanofarira pakati pezvimwe zvinhu. Mufananidzo Wemikwereti: GhHeadlines.
Muchidimbu, chinyorwa ichi chinovavarira kupa vateereri vedu zano rakazara rezvatiri nekuratidzira zviitiko zvehupenyu hwepakutanga zvevatambi venhabvu, mamaneja uye vane hunyanzvi pasi pemisoro inonakidza iyo yakanyatso nyorwa, yakanyorwa zvakanyatsojeka uye inofadza.
Nei Nyaya Dzevadiki - Vatambi Vanotamba uye VaElite Vakazvarwa Varombo
Vamwe vanamazvikokota venhabvu nevakakurumbira vakazvarwa vari varombo, vamwe havana chekugara, uye vamwe vakashanda kuzvisunungura kubva pakurarama kwehurombo. Chero nzira yaiitika zviitiko, hurombo chaihwo hwaive hwekukurudzira hwaitungamira kumatombo anozivikanwa kune hupfumi nyaya mubhola.
Iyo isingaverengeki uye inotyisa 7 tsamba izwi inozivisa nehupenyu nekusimuka kwe Cristiano Ronaldo, yaburitsa akanakisa mukati Luis Suarez, uyezve haina kupera vanhu vakapfuura; Roman Abramovich uye Gianni Infantino asi yakagadzirwa Gabrieri Jesu ' kusimukira mukurumbira kuchikurudzira mamirioni evana vanotambura muBrazil.
Kutambura asi kunyemwerera, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Gianni Infantino naGabriel Jesus vakanetsekana nehupenyu hwepakutanga. Mifananidzo Credits: LB.
Urombo hwakava chinokurudzira chine simba kunyangwe zvichishungurudza kune avo vanofamba nhabvu. Nechinofadza, mutambo weBhora wakazove mota yavo yekuvandudza mamiriro avo emari.
Nei Nyaya Dzevadiki - Vatambi Venhabvu uye VaElite Vakazvarwa Vapfumi
Padivi redhiri, vanoverengeka venhabvu uye nyanzvi dzakazvarwa dzakakura, vamwe vaine sirivheri, uye vamwe vane madhaimondi pacifiers. Nekuda kweizvozvo, vaive nekutanga kukuru kuhupenyu uye vaigara pamusoro pehurombo hwehurombo.
Zvinodiwa zve Aleksander Caferin uye Michel Platini vakamboshongedzwa nerutsigiro rwavaida kuti vararame hupenyu hukuru hwevatambi venhabvu vakaita Mario Gotze, Andrea Pirlo uye Gerard Pique vaisava vatorwa kune hupfumi vasati vawana mukurumbira.
Mario Gotze, Gerard Pique naAndrea Pirlo vakaberekerwa mumhuri dzakapfuma. Mifananidzo Credits: LB.
Nei Nyaya Dzevadiki - Vatambi venhabvu Ivo Vakapona Hondo neRiots seVana
Iyo nyaya yehucheche yehuwandu hwakawanda hwevamwe vatambi venhabvu haigone kutaurwa pasina kudhonza mafeni kuburikidza nerwendo runoshungurudza rwehondo dzevagari uye mhirizhonga ingadai yakapukuta vatambi mukuvapo.
Iko kutarisa muhupenyu hwepakutanga hweNigeria wekuzvarwa Victor Moses inotaura nezvekuparadza kuri kuita bongozozo kuNyakatho yeNigeria, zvakare haadaro Juan Cuadrado uye Serge Aurier vane ndangariro dzinofadza dzechisimba muguta reColombia reNecocli neIvory Coast zvakateedzana.
Juan Cuadrado ndemumwe wevashoma vevatambi venhabvu vakapona pahondo uye mhirizhonga panguva yeudiki. Mufananidzo Wekodhi: LB.
Nei Nyaya Dzevadiki - Vatambi venhabvu vangadai vakafa kare vachiri mwana
Nguva refu asati azive nezve mutambo wenhabvu, Diego Costa akange aine chiitiko chakashata chakapotsa chaita kuti hupenyu hwake huende.
Chiitiko chinotyisa chakaitika panguva iyoyo Costa aive achingova nemwedzi mitanhatu. Akasiiwa naamai vake vakaenda kunogeza ndiro. Little Costa akarara pamatiresi mukamuri yake yekurara asingazive kuti kune nyoka yehuturu shure kwake. Amai vake pavakadzoka kubva kukicheni kuenda pamubhedha waCosta, vakaona nyoka ine uturu ichiswedera kumwana wavo.
Josileide da Silva Costa akange afunga kuti chaive chidimbu chetipi, asi chinhu ichi chaaiona sechiputi chaive munzira kuenda kumwana wake. Nekukurumidza kufamba, akakurumidza kudhonza ruoko rwaCosta kuti amudzivise kubva pakurumwa nenyoka yehupfu iyi achiponesa hupenyu hwake.
Nei Nyaya Dzevadiki - Vatambi venhabvu Ivo Vanababa Vake Vaiva Ngano dzeMitambo
Iko hakuna kuramba chokwadi chekuti kuraira kwakabatsira vanoshuvira vatambi venhabvu kuti vaone tariro iri mukati mavo kunyanya kana vapi vamazano vasiri vamwe vanhu asi vanababa vekubereka kune vanopa mentees.
Pasina imwezve cliche sababa, semwanakomana, isu tinayo Thiago Alcantara uyo akatevera baba vake Mazinho. Vamwe vanosanganisira Saul Niguez iye akatsika-tsika nzira dzababa vake Antonio zvakare Sergio Busquets uyo akateedzerwa shure kwababa vake Carlos. Pane imwe nzira yenhaka inogona kuve yakapfuma?
Thiago Alcantara, Saul Niguez naSergio Busquets ndivo vanakomana kune nhabvu nhabvu. Mifananidzo Credits: LB.
Nei Nyaya Dzevadiki - Vatambi venhabvu Vakasiya Chikoro
Vatambi vashoma venhabvu havana kumbove nemoyo murefu kugara pasi uye kutora mirairo kubva kune vadzidzisi, vamwe vamwe vasina kupedza chikoro chesekondari sezvo avo nhabvu yetsiva yakasimuka zvine mukurumbira panguva yepakati pezera ravo.
Vatambi venhabvu vanosanganisira ngano se Pele, pamwe neyaimbove nyanzvi yeBrazil nhabvu uye mumiriri weBarcelona - Ronaldinho. Kuenda pasi kune vatambi mukati meyemireniyera zera - panguva yekunyora - isu tine zvakafanana nezva Cristiano Ronaldo uye nyeredzi yeBarcelona - Lionel Messi uyo asina kupedzisa kwakajairika dzidzo.
Ronaldinho, Messi naPele vaive vasina kugadzikana kumashure kwedzidzo panguva yehudiki. Mifananidzo Credits: LB.
Nei Nyaya Dzevadiki - Vanotamba Nhabvu Avo Vanoda Kusiya Kutamba
Zvinonzi kana kuenda kwacho kuchinge kwakaoma, iyo yakaoma inosvika. Iyo kuwanda yakave ichishandiswa mumakore ese apfuura mune zvese zviitiko zvevanhu kuedza hakuna bhora. Muchokwadi, zvakabatsira kuve nechokwadi chekuti nyika haina kupotsa pakuwana vatambi venhabvu vanogona kuve vakarega nguva refu pabasa ravo rekuvaka.
Havasi vazhinji vanoziva izvozvo Wayne Rooney's kuda nhabvu kwakadonha sepakiti yemakadhi paakangova mwana wemakore 14. Saizvozvo, zvingadai zvisina kuve zvinofadza Ibrahimovich munyika yenhabvu dai asina kutaurwa kunze kwekufarira hupenyu mumateki. Kudivi rake, Alisson Becker vabereki vakapotsa vamuburitsa kunze kwebhola nekuti akaramba achinyora zvishoma kukura kwebiological nyangwe pazera re15.
Mudiki Wayne Rooney uye Ibrahimovich vakapotsa vatamba nhabvu. Mifananidzo Credits: LB.
Nei Nyaya Dzevadiki - Vatambi Venhabvu Vakatanga As Outfield Players
Dynamics ishoko risingawanikwe muFizikisi zvinyorwa, riripo mubhora rakapihwa kuti mutambo uyu uriwo zvese nezveFizikisi. Izvo zvese zvinotanga nedanho rekutanga rakakosha iro vatambi venhabvu vanotora vachiri vadiki kurova bhora kuti rinakidze iko. Mushure maizvozvo, vanopinda mu nhabvu yemumugwagwa kana kuti vanodzidzisa nezvikwata zvemuno nemakirabhu emakirabhu.
Panguva iyo varairidzi venhabvu varimo, vanoedzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana kusvikira nzvimbo yavo yakasimba kana forte yagadzwa. Nekudaro, hazvishamise kuti vamwe vakadzungaira kubva kunzvimbo dzekudzivirira kusvika kunzvimbo dzekutengesa sevatambi apo vamwe vashoma Thibaut Courtois akadonha kubva padanho rekudzivirira kusvika pakuva nyairaki yakazara nebasa. Saizvozvo, David Gea aive mutambi wekunze kusvikira anzwa kumba mukati memipimo yechinangwa chepositi.
David Gea naTrebaut Courtois vakatanga vakadzidziswa sevatambi vekunze vasati vava vatambi vetsiva. Mifananidzo Credits: LB.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Nei Nyaya Dzemwana. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka, ndokumbira ugovane nesu nekupindura pazasi. Tichagara tichikoshesa nekuremekedza mazano ako.
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 23, 2020
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 21, 2020
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 22, 2020
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 20, 2020